Christopher na-anata ego n'aka HM the Queen! | Li Tim-Oi Foundation
Li Tim-Oi Foundation > blog > Christopher na-enweta ego site n'aka HM the Queen!
Otutu ekele diri otutu aka anyi Canon Christopher Hall, onye bu otu n’ime ndi n’enye ndi Maundy Money n’afọ a. A họọrọ Christopher maka nsọpụrụ a maka ije ozi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 25 dị ka odeakwụkwọ Asọpụrụ nke Li Tim-Oi Foundation.
Budata akwukwo ozi anyi ohuru
Akwụkwọ LTOF Oct 2019 - A4